Iko Inonyanya kukosha Zvikwereti zveKushandura Kushanda | ITS
Zvakanaka, kusvetuka hakukwanisi kuitika. Zvinotyisa, izvo hazvisi kuchenjera, kunyanya munzvimbo yekubatanidza. Mune mhaka ipi zvayo, paunounza kunaka mukati mese-mish-mash, iwe unosanganisira hutete hwekuchengeteka! Virtualization inokubvumira kugadzira hurongwa, kushandiswa kwegadziriro, zvishandiso, nezvimwewo kuedza zvakanyanya chero chinhu pasina kutengesa kunze kwehupfumi hwezvino kana kutenga kuiswa patsva kunodhura kusingashandisi kwenguva refu.
Iko kukwanisa kuedza zvinhu zvitsva hakungori kuchengetedza kururama kwehupenyu hwako huripo kuwedzera kuwedzera unyanzvi hwako sesangano. Tinogona kupfuurira kwenguva yakareba pamusoro pokuti kushandiswa kwepamusoro kwakadini, asi isu tichasiya izvozvi kuVMware.
Nguva Yokuwana Chiziviso cheKushandura Kwebasa
Zviti zvinyorwa zvikamu zvekutanga zvebasa raTI nyenyedzi. Vanokubatsira iwe kutanga nemarangi uye mabhoti uye uzviendese iwe pachako, kunyanya pamwe nekuwedzera kwezvino kuitika. Kwese kupi zvako kwaunotendeuka, kunaka kwekushandisa kuri kushandiswa pamusoro peI IT field, zvichiita zvikwangwani zvakabatana zvakanyatsozivikanwa.
Icho chiyeuchidzo chaunofanira kukunda chinopesana nechepamusoro nepamusoro.
Izvo hazvina huwandu hwakawanda hwekugadziriswa kwepamusoro kunze uko, kunyange zvakadaro iyo inogona kukurudzira nhau. Chiyero chikuru chechakavanzika pamusoro pekugadziriswa chinopera kana une munda muduku wezvimwe nzira. Rega zvinhu zvaunoshandisa chaizvo (kana kuti zvinoda kushandisa) kurongedza zvigadziriswe zvipi uye zvido zvako. Heino chikamu chezvinyorwa zvakanakisisa zvaunofanira kutevera munharaunda yakanakisisa yekuita zvakanaka.
Zviri pachena kuti iyo mhizha inopayona mukugadzirisa zvikwangwani ndeyeVMware. Kune zvikamu zvekutetwa zvinopiwa nevanoshamwaridzana navo paVMware, asi zvisarudzo zvedu zvepamusoro (zvakanakira) ndezvishoma zvasarudzo dzavo dzakakurumbira.
Pachinhu chakanaka chokuti iwe unofanira kushanda nenzira yako kusvika kuVCP-level certifications, tanga ne vSphere 6 Foundations. Izvi zvinowedzera kusvika kune chiitiko cheVMware uye chokwadi chakarurama pasinei nenguva yako yekusimudza nekukurumidza nemaitiro uye kudzidza iwe unoda kuVCP cert.
The Data Center Virtualization (VCP6-DCV) chiyeuchidzo chinowana makero akanaka ekupa iwe ruzivo rwaunofanirwa kutarisa mumunda.
Uyezve, tine ziso reVMware rinoshandiswa 7 zvitiso zvitsva pachiitiko chacho. VMware haina kupa v7 Data Center Virtualization cert ikozvino, zvisinei isu tiri kutarisira kuona izvozvo nokukurumidza.
Networking juggernaut Cisco inopa kuburitsa kwezvidzidzo zvinosanganisira nekuwana kuburikidza nekugadzirisa maitiro uye ruzivo.
* Ndapota cherechedzai kuti Cisco yakafanana nekugadzirisa nhamba yakawanda yekuongororwa kwayo kwepa data, dzimwe dzacho dzicharega basa muna July 3, 2017.
ICisco Certified Networking Associate (CCNA) Data Center ndiyo inzvimbo inotenderera inotangira Cisco. Iyi cert inokuisa iwe kuZviviso zveZvire uye zveUnited-level, saka funga nezvayo sekutangira danho rako reCisco virtualization.
ICisco Unified Computing Specialist certification inosanganisira zvinyorwa zveCisco Unified Computing System uye inoedza kukwanisa kwako kugadzirisa zvakagadziriswa Data Center. Ichi chiyeuchidzo chiri kuenda nenzira ye dodo munguva pfupi. Ichagadziriswa muna July 4, 2017, saka chimbomira pachiitiko chaunoda kuwana ichi chiyeuchidzo! Pachinhu chakanaka chokuti iwe haugone kuomesa iyi iyo isati yarega, CCNP Data Center cert ndiyo inogadzirirwa kushandiswa.
ICisco Certified Networking Professional (CCNP) Data Center chiyeuchidzo inosanganisira kuongorora kwechina uye yakashata. Iko kune zvisarudzo zvekuongorora zvinokubvumira kuti usarudze nzira yakawanda yepropos yec cert yako, kune imwe yero.
Nzira yaMicrosoft yekugadzirisa kushandiswa kwepamusoro inobva mune sangano rinogadzirisa apo iwe ungaguma uchitarisira mitambo, mavhareji ekuraira, kana zvisinei nemapurogiramu epurogiramu. Pane zviyeuchidzo zviviri kana zvitatu zvingakubatsira kuti ubatane sysadmin uye nekugadzirisa maitiro.
The Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 (kana Windows Server 2016) chiyeuchidzo chimiro chekumira pakati pezvinyorwa zvepamusoro zveMicrosoft zveAI aces uye zvinokuziva iwe neWindows Server virtualization. Ichi chikwata chinosanganisira zvitatu zvidzidzo, zvose izvo zvine chizivo chekuongorora. Chero zvingava, iyo spoonful ye shuga inogona kubatsira iyi mishonga inoderera ndeyokuti MCSA inokosha kuZvivheji-degree certification.
The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Cloud Platform uye Infrastructure certification inotaura zviviri kana zvitatu zvinoshamisa zveMicrosoft: Azure uye Windows Server virtualization. Pasi peMicrosoft new certificate certification, iwe une mukana wekutora miedzo kubva mudziva rekusarudza, zvichikupa mukana wekuchinja chiregi chako. Iwe unowana MCSE kuburikidza nekupedza kuongororwa kumwe chete, asi zvino unofanira kutora imwe yero kuongorora nguva dzose kuti uchengetedze chiyeuchidzo chako chiripo uye chakakodzera.
Zvinhu zveCitrix zvakakurumbira mubhizimusi reT IT, uye pane imwe nguva yekuti iwe unopedzisa kushanda nezvinhu izvi, zvigwaro zveCitrix zvichave zvakakosha zvikuru kwauri. Citrix mutambi wenguva yakareba pachiitiko chekuita zvakanaka uye inopa zviyeuchidzo zvitatu zvaunofanira kufunga nezvazvo mune unyanzvi hunobudirira:
Chimwe nechimwe chezvikiti izvi chinonyanya kuisa paCitrix yekuendesa chinhu, XenDesktop, ichikutungamirira kuburikidza nekugadzirisa zvishoma nezvishoma mano uye chinhu chezvinhu.
Linux sysadmins, ivai pamwe chete! Red Hat inopa hutano hwekugadzirisa zvikwangwani zvinoshandiswa zvakanyanya kune sysadmins avo vasina kushamiswa kubva kune vatengesi vakawanda. Red Hat inopa chibvumirano chikuru chekugadziriswa, chiverengero chakakura chazvo chinosanganisira maitiro, kunyange zvakadaro chikwata chimwe chinobuda sechinhu chakanaka chakakwana chekuita basa rako remabasa.
The Red Hat Yakagadziriswa Virtualization Administrator (RHCVA) cert inotumira Linux yako basa rekuita basa uye rinosimbisa kutinzwisisa kwako uye kukwanisa kutumira uye kutarisira kunaka kwekweshe, mauto, uye vashanyi vanoshandisa Red Hat Virtualization. The RHCVA Saizvozvowo rinokuisa iwe kuti utsvake Engineer-uye Architect-level certifications.
Zvakakosha kuti usambofa wakananga nenzira inoenda kune yakagadziriswa. Tora chigaro, tsvaga kuti chii chinopfurikidza, uye ona kuti chii chakanakisisa zvaunoda. Zvitiso zvishomanana zvinouya mukuchinja kwehuwandu hwehutano, hunoda hutungamiri hwakarongeka hunochengetedza mupfungwa yekupedzisira chinangwa kukwira danho. Kuita mitambo yakarongeka kare kunogona kukuchengetedza nguva uye hutano, uye tatove takaratidza hutano hwakanaka hwokuti tive nebasa rekushandisa gore uye virtualization kare.
Zvinhu zvavari izvo zvavari, iwe ungati iwe uri kuenda kunowedzera here?
Chii chaunosendamira kune: Seva iyo inogona kungoita imwe chete yebasa rekushanda? Kana, kune rumwe rutivi sevhaya inotanga Hypervisor inoita mishonga yakawanda yakawanda, iyo inogona kuramba ichimhanya pane imwe nzira yekushanda zvigadziriro izvo zvose zvinonyatsogadziriswa pamusana pekuwedzera mari? Chisarudzo chechipiri chichave chakanaka uye chinoshanda kune chero sangano. Chero mutungamiri aigona kufara kushandisa zvigadziriswa uye kukwana mari yakakwana yekuita kuti zvizvarwa zvako zvive zvakakomberedza.
Zviyeuchidzo zvinopiwa kubva kuVMware, Cisco, Microsoft, Citrix uye Red Hat zvichakuratidza kuti ungaita sei chizvarwa chako chakakomberedza. VMware sekupedzisira yakadonhedza zvipupuriro zviviri zvitsva paVMware Certified Professional 7 track, the VMware Certified Professional 7 - Cloud Management uye Automation (VCP7-CMA) uye VMware Certified Professional 7 - Desktop uye Mobility (VCP7-DTM) kuti ikubatsire ace zvinhu zvavo zvakanakisisa.
Kuwana chiziviso chekutsvaga chinogona kunge chakaoma asi iwe uchigadza mutemo kune zvidzidzo zvingakubatsira iwe uye basa rako richakubatsira iwe kutsvaga nzira iyo ichakubatsira zvachose semudzidzisi wekutengesa. Imwe nzira ndeyokutanga nezvinhu zvaunoshandisa pabasa. Rega zvinhu zvauri kunyanya ikozvino uchishandisa mufananidzo kubva paunotanga, zvino rega iwe pachako kufarira uye kushingaira pamusoro pekusimudzira mberi kufambira mberi kusarudza matanho ako anotevera.
Sezvo utsika uye gore richiramba zvichienderera mberi kukura uye zvinoita kuti iwe uwedzere kupindira mumamiriro ako ezvinhu, kunzwisisa kwako pakuita zvakanaka hakusi kungokuita iwe kukosha kune sangano rako kuwedzera kuzarura mavhesi ekudaidzwa kwaunofunga nenzira iyo iwe hauna kumbofunga nezvazvo.
Virtualization icharamba ichingokura kana usina iwe, sei urege kuva chikamu chayo?
Nzvimbo Yakagadzikana - Nheyo Yokubudirira Kwechokwadi